महिनावारी हुँदा किन बार्ने ? यस्तो छ कारण – साइन्स इन्फोटेक
महिनावारी हुँदा किन बार्ने ? यस्तो छ कारण
डिसेम्बर 20, 2019 अप्रील 1, 2021 साइन्स इन्फोटेक0Comments महिनावारी
हिन्दू धर्म संस्कृतिले केवल गलत नगर मात्र भन्न खोजेको देखिएको छ । कुनै पनि काम गर्दा भविष्यमा कसैलाई दु:खको सामाना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेको रहेछ किनकि त्यति बेला रोगको ’boutमा जानकारी नहुनाले त्यो समयमा गर्भ रहदा अपांग, लुलो, लंगडो सन्तान नहोस् भनेर यो नियम लागु गरेको देखिन्छ ।
महिनारीको समयमा सम्पर्कमा आए मा सिफिलिस (भिरिङ्गि), गोनोरिया (धातु रोग) जस्ता अनेकौं यौन रोग लाग्न सक्ने भनेको छ । महिवारी हुँदा कम्तीमा ५ दिन सफाइमा रहनुपर्छ मात्र भनेको छ । यो समयमा छुनु हुदैन भन्नु सरासर गलत हो । त्यही डिम्बको साहेताले बसेको सन्तान प्यारो हुने रे तर आन्तरिक कारणबाट गर्भधारण नभएर खेर गएकोलाई बार्नुपर्ने रे कस्तो बुझाई छ ।
← अनावश्यक बढि औषधि खानाले के हुन्छ ? यस्तो छ डा. राम बहादुर बोहराको सुझाव
उत्कृष्ट नमूना विद्यालय श्री त्रिभुवन बाल माध्यमिक विद्यालय ढोकी →
मे 3, 2019 मे 3, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0